Roma 3-4 Juventus: Wiilasha Mourinho Oo Lagu Garaacay Garoonka Juve
HomeWararka CiyaarahaRoma 3-4 Juventus: Wiilasha Mourinho oo lagu garaacay Garoonka Juve
January 10, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Italy 0
Kooxda uu hogaamiyo Jose Mourinho ee Roma oo labo mar ku hormartay hogaanka inkastoo guuldaro 4-3 ah ka soo gaadhay 10 ciyaartoy oo Juventus ah kulan ka dhacay Stadio Olimpico iyadoo Roma gool rigoore ah qasaarisay dhamaadka ciyaarta.
Xidiga Tammy Abraham ayaa hogaanka u dhiibay Roma Daqiiqadii 1aad Lakin Paulo Dybala, ayaa ka bar-bareeyay 18 daqiiqo ciyaarta oo socota iyadoo lagu kala nastay 1-1.
Qebta labaad Roma ayaa heshay labo gool oo deg deg ah kuwaasi oo ay kala dhaliyeen Mkhitaryan iyo Lorenzo Pellegrini ciyaar u muuqatay inay ku gacan sareyso Roma.
Si kastaba ha ahaatee, Juventus ayaa ugu jawaabtay 3 Gool oo ka kala yimid Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski iyo Mattia De Sciglio, ka hor inta uusan Wojciech Szczesny rigoore ka badbaadiyay Pellegrini 20kii daqiiqo ee ugu danbeysay ee Ciyaarta iyadoo kulanka uu ku soo dhamaaday 3-4.
Juve ayaa jug soo gaartay markii Federico Chiesa lagu qasbay inuu dhaawac jilibka ah uu uga baxo garoonka qeybta hore ee ciyaarta ka dib taakal uu kala kulmay Chris Smalling, Sidoo kale Matthijs de Ligt ayaa Casaan ka qaatay kulankan.
Natiijo ahaan Juventus ayaa ku jirta booska 5aad ee horyaalka halka Roma ay u dhacday booska 7aad iyadoo leh 32 dhibcood.
Roma ayaa marti galin doonta Cagliari Axada soo socota halka Juventus ay u safri doonto San Siro si ay arbacada Supercoppa Italiana ula ciyaarto Inter.